Khaladaad | January 2020
Ugu Weyn Ee Khaladaad
192.168.1.1: sababta aysan u galin router, ogow sababta
Hello! Ku dhowaad laba asbuuc waxba ma qorin blogga. Waqti dheer ma aan ka helay su'aal ka mid mid ka mid ah akhristayaasha. Nuxurkiisu wuxuu ahaa mid sahlan: "Maxay u tegi waayeen router 192.168.1.1?". Waxaan go'aansaday inaan ka jawaabo ma aha oo kaliya isaga, laakiin sidoo kale in ay soo saaraan jawaab ah foomka maqaal yar. Tusaalaha Sida loo furo goobaha Sababta maxay u socon waayaan 192.
Windows kuma xirneyn Wi-Fi. Maxaa la sameeyaa qaladkan?
Taasi waa sida laptop shaqaynaya (netbook, iwm.) Waxay la shaqaysaa shabakada Wi-Fi iyo wax su'aalo ah. Oo mid ka mid ah maalmaha aad u soo jeesatay - oo qaladku wuxuu qaadaa: "Windows kuma xirneyn Wi-Fi ...". Waxa la sameeyo Sidaa darteed dhab ahaantii waxay la jirtay laptop guriga. Maqaalkani waxaan rabaa inaan sheego sida aad u tirtiri lahayd qaladkan (marka lagu daro, sida tababarka tusayo, qaladkan waa mid guud).
Cilad "BOOTMGR waxaa ka maqan cadaadiska cadaadiska + alt + del" oo leh shaashad madow marka Windows la furayo. Waxa la sameeyo
Hello Maalintii kale waxaan la kulmay qalad aan fiicneyn "BOOTMGR waa maqan ...", oo muuqatay markii laptop-ka loo rogay (habka, Windows 8 ayaa lagu rakibay kombiyuutarka). Qaladka waxaa si dhakhso ah loo saxay, ka saara dhowr sawirro shaashad oo shaashadda si ay u muujiyaan wixii la xidhiidha dhibaatada la midka ah (waxaan u maleynayaa in in ka badan darsin / boqolaal qof ayaa wajihi doona) ... Guud ahaan, qalad noocaan oo kale ah wuxuu u muuqan karaa sababo badan: Ku rakib digsi kale oo adag oo kombuyuutar ah oo ha ka dhigin goobaha habboon; dib u dhigo ama bedesho goobaha BIOS; xidhitaanka aan habboonayn ee kombiyuutarka (tusaale ahaan, inta lagu jiro korontada si degdeg ah looga baxo).
Hello Iyadoo aan jirin nooc kasta oo qalad ah, Windows ayaa laga yaabaa inay noqon doonto mid aad u caajiso? Waxaan haystaa mid ka mid ah, maya, maya, waana inaan wajahaa. Nidaamka qaladka waa sida soo socota: Helitaanka shabakada waa luntay oo fariin "Shabakad aan la aqoonsaneyn iyada oo aan la helin internetka" ayaa ka muuqda saxanka saacadaha xiga saacadda ... Inta badan waxay u muuqataa marka go'aammada shabakadu ay lumaan (ama isbeddelaan): tusaale ahaan, marka bixiyahaagu bedelo goobihiisa ama cusboonaysiinta (dib u sameynta) Windows, iwm.
Ciladda "dib u bilaabi oo dooro aaladda bootka ama wadista waraaqda qalabka boot ee qalabka boot oo riix fure" markaad soo rogto kombiyuutarka ...
Hello Maqaalkani Maanta wuxuu u taagan yahay hal qalad "old:" oo macnaheedu yahay: dib u bilaabi oo dooro qalabka furaha saxda ah ama gali warbaahinta boot ee diskka boot qalab iyo riix furaha furaha ", arag
Sidee loo xalliyaa khaladaadka ciladda DISK BOOTURE, INSERT SYSTEM DIYAAR IYO WADAR GALINTA?
Guud ahaan, haddii loo turjumo ereyga, qaladka "DIYAARSAN CINJIRKA, INSERT SYSTEM DISK AND ENTERPRESS SETUP" macnaheedu waa in diskka boot waa la dhaawacmay, waxaadna u baahan tahay inaad geliso disk kale nidaamka oo guji badhanka "Enter". Qaladani mar walba macnaheedu ma aha in darawalada adag ay noqdaan kuwa aan la isticmaali karin (inkastoo, mararka qaarkoodna, waxay sidoo kale tilmaamaysaa tan).
Xaqiiqada 651, sida loo xalliyo?
Hello Ma jiro qof ka qaldan qaladaad: qofna kuma jiro kombiyuutar (sida tababarku muujinayo) ... Marka la isku xiriiriyo internetka oo loo marayo PPPoE, qaladaadka 651 mararka qaarkood ayaa dhacaya. Waxaa jira sababo badan oo ay u muuqan karto. Qodobkan waxaan jeclaan lahaa in aan tixgeliyo sababaha ugu muhiimsan ee dhacdooyinkooda, iyo sidoo kale siyaabo lagu saxo qaladkan.
https://termotools.com so.termotools.com © Khaladaad 2020